I-Media Links Ithuthukisa Izisombululo ze-IP ze-100G kwi-NAB New York's Big Stage - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Media Links inyusa i-100G IP Solutions ku-NAB New York's Big Stage
I-Media Links inyusa i-100G IP Solutions ku-NAB New York's Big Stage
U-Al Nuñez uSomlomo Okhonjisiwe engqungqutheleni Ehambelana Ye-SVG TranSPORT
Ama-Media Links®, umenzi futhi oyiphayona kwiMedia phezu kobuchwepheshe bokuhambisa i-IP, uzobe ekhombisa embukisweni we-NAB NY, ngo-Okthoba 16-17, 2019 eBooth No. N626. Inkampani izobhekana nezidingo ezibalulekile zokuba Abasakazi bafake izidingo eziphezulu zebandwidth nezinsizakalo ezivumelana nezimo kuwo wonke amanethiwekhi abo we-IP.
Ngaphambi komcimbi weNAB NY, i-Al Nuñez, i-SVP yokuthengisa - iMelika kanye ne-EMEA yeMedia Links izokhuluma eMhlanganweni weSports Video Group TranSPORT obanjelwe e-NYC ngo-Okthoba 15th. Iguqulwe ngu-Adam Whitlock nge-ESPN, u-Al uzojoyina iphaneli yezikhulumi ezingxoxweni kwiPublic vs Private: The State of IP Contribution and Internet-based Production.
Ngalesi sikhathi leli phaneli, ochwepheshe bezimboni bazoxoxa ngokwanda kokuthembela kwinethiwekhi ngokusebenzisa i-inthanethi yomphakathi neyangasese, kanye nokwethulwa kwama-codecs esikhathi esizayo, bathembisa ukwenza i-IP kube yinto entsha evamile yokusakazwa kokuthengwa kwempahla. Lokhu kuhlobana ne-Media Links 'NAB NY idokodo, lapho inkampani izokhombisa khona izixazululo zayo zenethiwekhi ye-IP yokuphetha ukubhekana nobabili studio LAN kanye namanethiwekhi endawo ebanzi.
Izisombululo zezobuchwepheshe zeMedia Links zihlanganisa izingxenye eziseceleni, ezingumgogodla nezokulawula ezenzelwe ngokukhethekile ukusekela amazinga angabambisani, ahlinzeka ngebhuloho elisuka kwi-SDI liye ezindaweni ze-IP ngaphakathi kwezingqalasizinda zokusakaza, zemidiya nokuzijabulisa. Le nkampani inikezela ngabasakazi nabanikezeli benethiwekhi indlela yokufuduka ukuletha izinsizakalo ezintsha ezifana ne-4K UHD nokukhiqizwa okukude nokuxhasa ukuthuthwa kwenethiwekhi kwe-100 Gbps nokushintshana.
Esiteji eJacob Javits Isikhungo e-NYC, kuzoqokonyiswa iphothifoliyo yezobuchwepheshe elandelayo ye-Media Links:
Uchungechunge olusha lwe-MDX100G switch, olususelwa kumadivayisi we-COTS ase-off, athuthukiswa ngesici se-Media Links esigxile kwizidingo ezihlukile nezidingayo kakhulu zomkhakha wezindaba / wokusakaza.
Uchungechunge lwe-MDP3000 lwe-IP Media Gateways, olunikezela ngevidiyo, okulalelwayo nokuthuthwa kwedatha kuya / kusuka kumphetho wenethiwekhi ye-IP, nokusekelwa kwe- SMPTE I-ST2110, i-4K UHD kanye ne-TICO, JPEG-ULL ne-JPEG-XS.
I-ProMD-EMS (Isoftware Yokuphathwa Okuthuthukisiwe), ihlela yonke imisebenzi yenethiwekhi kubandakanya ukuqinisekiswa kwensizakalo, ukuhlinzeka, ukuhlela, kanye nokuphathwa kokusebenza / kwe-alamu.
U-Abner Figuereo ujoyina i-LYNX Technik Inc. njengo-VP Business Development - Novemba 19, 2019
I-Media Links inyusa i-100G IP Solutions ku-NAB New York's Big Stage - Okthoba 8, 2019
I-HDR Evie ye-LYNX Technik Debut's ku-IBC 2019 - Septemba 9, 2019
U-Adamu Whitlock Al Nunez Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Umnikelo ESPN I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Ama-Media Links I-NAB NY I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows I-SVG ezokuthutha I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo ividiyo nge-IP	2019-10-08
Olandelayo: I-Videograph / Umakhi Wokudala